Viligili, Upper South Province, Maldives
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguNasrulla
I-Iramage isembindini weHavdhoo Atoll, eVillingili. Indawo inamagumbi amathathu anendlu yangasese encanyathiselweyo. Impahla kunye nekhitshi ziyafumaneka. Indawo yokutya okukhawulezayo, iLemonSugar imi kwindawo enye. I-Imaage ikumgama onokusetyenzwa ukusuka kwizibuko.
Kwiminyaka yakutshanje i-Huvadhoo atoll iye yaba yindawo yabakhenkethi eyaziwayo kwiiMaldives, ngenxa yeendawo zayo zokuntywila ezintle kunye neempawu zendalo ezicocekileyo. Zonke iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide zaseGaafu Atoll zinokuqhayisa nge-snorkeling ebalaseleyo yendlu, iilwandle zesanti emhlophe kunye namachibi acocekileyo aluhlaza alungele ukuqubha kunye nemidlalo yasemanzini.
Umbuki zindwendwe ngu- Nasrulla
Ukufika apha, Isikhululo seenqwelomoya sasekhaya (GKK) sime kwisiqithi esikufutshane, iKooddoo. Kuthatha imizuzu emi-3 ukusuka eKooddoo ukuya eVillingili. Ixesha lendiza elisuka kwiNdoda limalunga nemizuzu engama-55.